IProjekthof Karnitz - igumbi lesemina kunye nendawo yokuhlala - I-Airbnb
IProjekthof Karnitz - igumbi lesemina kunye nendawo yokuhlala
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguProjekthof Karnitz
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uProjekthof Karnitz iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu endala yasefama ibonakaliswe ngokulungiswa kwayo ngononophelo, okwadala iindawo ezintsha zokusebenza ngaphandle kokutshintsha into esisiseko kunye nokwakhiwa. Isiphumo segumbi lesemina kwakunye namagumbi amabini, amathathu namagumbi aneebhedi ezine. Kwigumbi lesemina kunye namagumbi amane (12-17m²) uya kufumana imozulu yegumbi elikhethekileyo ngenxa yodaka lodongwe ezindongeni kunye nemigangatho eyenziwe ngamaplanga.
I-haystack yangaphambili phantsi kophahla oluguqulwayo inika indawo yokuhlala kumagumbi amabini, amathathu kunye namagumbi amane okulala kunye nombono wesibhakabhaka esineenkwenkwezi. Amagumbi alula kodwa athokomele ngeebhedi ezingatshatanga kunye neebhedi ezimbini (iibhedi eziphezulu), i-wardrobe, itafile kunye nezitulo.
Ukuhlamba kunye nokusebenzisa izindlu zangasese kukho i-staircase yesiqingatha edibanisa indlu yamatye endala kunye nendlu entsha yokhuni ngombono wegadi.
Kwindawo eyayisakuba yindlwana yomvundla kukho ikhitshi eliphangaleleyo, elipholileyo elinetafile enkulu yokutyela kunye ne-oveni yodongwe, apho senza khona amaqela eesemina, abahlali kunye neendwendwe zasehlotyeni ngemifuno yokupheka evela kwigadi yethu.
Kwikhitshi yeendwendwe kwiholo yobugcisa kunye negadi edibeneyo ungalungiselela isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa ngokwakho. Kukho ifriji, isitovu segesi, iketile, izitya, njl.
Izinto ezikhethekileyo zengingqi zingonwatyelwa kwibar yegadi yaseKarnitzer.
Kukho ukufikelela kwi-WiFi ngaphakathi nakwifama endala.
Isemina kunye namagumbi omsitho
La magumbi alandelayo angabhukishwa ngawodwa:
Igumbi lesemina eli-1 elikhulu elinama-80 m²: Indawo eyayifudula izinzile iye yaba ligumbi lesemina yokuyila: ipiyano, enkulu nencinci, ingxoxo engqukuva nengqukuva, ukubhala kunye neetafile zokutyela kunye nezitulo ezininzi zikumema ukuba nabelane ngezimvo kunye nomsebenzi. Okokugqibela kodwa okungakuncinananga, umbono ngefestile endala enesitali kunye nezinto zayo zobugcisa uvula igadi kunye nedlelo legusha elidibanayo, elibonakala lingenasiphelo kunye nemingcunube yalo engcolisekileyo.
Igumbi lokuphumla elikhulu eli-1 (iholo) elineetafile nezitulo ozikhethelayo, iisofa, umgangatho wokudanisa, iqonga elino-250m²
Umbuki zindwendwe ngu- Projekthof Karnitz
Als Kultur-Natur-Raum in der Mecklenburgischen Schweiz lädt der Projekthof Karnitz zu Kunst & Kultur, Bildung & Wissenschaft, Handwerk & gemeinsamen Aktionen ein.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Neukalen